Afuuf Xaraashka soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda - Xiangfu
Guriga > Alaabada > Afuuf Xaraashka
Moodhida Qunyarku waa hab dhaqso badan u koraya. Habka naqshadeynta dharbaaxadu waxay bilaabeen inay soo saartaan fiitamiinada polyetylenka hooseeya inta lagu jiro Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Dabayaaqadii 1950meeyadii, dhalashada sare ee polyetylenka iyo kobcinta mashiinnada naqshadeynta dharbaaxadda, tikniyoolajiyada naqshadeynta ayaa si ballaaran loo adeegsaday. Balaastikada ku habboon naqshadeynta dharbaaxa waxaa ka mid ah polyetylen, polyvinyl chloride, polypropylene, polyester, iwm, iyo weelasha banan ee la soo saaray ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa haamaha baakadaha warshadaha. Marka loo eego habka isbarbardhiga, naqshadeynta dharbaaxa waxaa loo qaybin karaa dharbaaxida dharbaaxada iyo dillaaca dharbaaxada, kuwa cusubna waxay leeyihiin naqshadeynta lakabyo kala duwan iyo dharbaaxinta dharbaaxada.
Waxyaabaha Soosaaridda Biyamarka waxaa loo qaybiyaa 4 qaybood, oo kala ah Pet Bottle Flow Moodada, Sanduuqa Xayawaanka Tooska ah, Mashiinka Kaydinta Caagga Weelka, Cabitaanka dhalada dhalada ah, soo dhowow iibsashada.
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co., Ltd waa shirkad iibisa Blow Moodhadhka Shiinaha, dhammaan noocyada wax soo saarka iyo iibka, qeexitaanno kala duwan, tayo sare iyo qiimo hooseeya, moodallo dhameystiran, ku-talogal ah, iibinta tooska warshad!
The soo socda waa ku saabsan hufan balaastig ah sanduuq la xiriira, Aniga rajo ku I caawi adiga ka fiican fahmay hufan balaastig ah sanduuq.
The soo socda waa ku saabsan ODM xayawaanka balaastig ah dhalo la xiriira, Aniga rajo ku I caawi adiga ka fiican fahmay ODM xayawaanka balaastig ah dhalo.
Oem Xayawaan Caag Dhalo
The soo socda waa ku saabsan Oem Xayawaan Caag Dhalo la xiriira, Aniga rajo ku I caawi adiga ka fiican fahmay Oem Xayawaan Caag Dhalo.
Lagu Sameeyay Afuuf Xaraashka gudaha Chgudahaa Xiangfu warshad - soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Soo dhawow ku our warshad iibso sare tayo leh iyo hooseeya qiimo Afuuf Xaraashka. Anaga doonaa siin adiga leh xigasho iyo bilaash ah tusaalaha.